U-Arnold Schwarzenegger ubuyela ehlathini ePredator: Izindawo zokuzingela - iGamesNews
UMajor Alan "Dutch" Schaefer, ongafi ngu-Arnold Schwarzenegger, ubuyela ehlathini ukuyolwa ePredator: Hunting Ground.
Abazingeli abesabekayo abasemzini bazobhekana nesitha sabo esesabekayo kunethuba elisha, manje ngenguqulo yomakadebona futhi abakulungele ukunqoba kule mpi. Ngenxa ye-DLC entsha yamahhala yomdlalo, emenyezelwe namuhla ku I-PlayStation blog.
Lokhu okuqukethwe kuzotholakala ngoMeyi 26, okunikeza ukuphendula ukuthi i-Dutch ibilokhu ikwenza kusukela ngo-1987. Kodwa-ke, amathuba okudlala nawo azoba nentengo okufanele inqunywe emahoreni ambalwa alandelayo.
UDutch uzobe ehlomile ngesibhamu sakhe esithembekile i-QR5 "Hammerhead", uhlobo lwesikhali asisebenzisa ku-movie yokuqala, esasiyohlobana no-Arnold ngawo-1980.
I-Predator: Izizinda Zokuzingela zizoba nohlelo oluhleliwe lokuvuselelwa kwamahhala oluzokwandisa udaba futhi lukhokhelwe okuqukethwe okungalandwa ezinyangeni ezi-4 ezizayo, kumemezele ukuthi okuningi kuzolandela.
IDutch Schaefer ibizongena le ndaba ngesiboshwa se-mission yokutakula impi ehlathini laseMelika Ephakathi. Bahola iqembu labo lokusindisa (hhayi ababulala), bayakwazi ukuhlasela amabutho ezitha.
Kodwa-ke, bathola ukuthi iqembu lalithunyelwe ngaphambili futhi lachithwa ngesihluku yibutho elingaziwa. Lo mhlaseli ongaqondakali ubulala ilungu ngalinye leqembu lamaDashi ngamunye, ebazingela ezemidlalo.
Ebamba amakhanda abo njengeziqu eziyindondo, umzingeli ubhekene nempi yakhe emangalisa kakhulu lapho amaDashi ezinikela esilwaneni sakhe endaweni yokunxenxa izibhamu zakhe. Lesi simiso esihle kakhulu sithatha i-Predator ngokumangala, onqotshwa umoya womuntu.
Bekungeke kube okunengqondo kakhulu ukuthi into efana naleyo yenzeke kuPredator: Ukuzingela Amagquma, njengoba uhlangothi lomuntu kunguMdubuli Womuntu Wokuqala futhi iDutch ihlomile ngokufanele, kepha ngokuqinisekile lendaba yakhe izophathelene nale mpi entsha.
Tags:ehlathini ePredator Izindawo Schwarzenegger UArnold ubuyela zokuzingela
Some aspects of ‘Cyberpunk 2077’ can cause epilepsy and that is not the most ‘cyberpunk’ …
"Let's not expect a spectacular graphic jump"